शाहरूखले बाल्कोनीबाट मोबाइल झारेपछि... - Purbeli News
प्रकाशित मिति: बिहिबार, आश्विन ०७, २०७८ समय: १६:१८:२८
काठमाडौं / बलिउड अभिनेता शाहरूख खानलाई दर्शकले फिल्मको पर्दामा हेर्न नपाएको पनि तीन वर्ष हुन लागिसक्यो । उनी पछिल्लो पटक सन् २०१८ मा प्रदर्शन भएको ‘जिरो’ फिल्ममा प्रमुख भूमिकामा देखिएका थिए । त्यो फिल्म व्यावसायिक रूपमा असफल भएपछि उनले अर्काे फिल्ममा अभिनय गरेका छैनन् ।
विज्ञापनमा शाहरूख आफ्ना सहायकका साथ घरको बाल्कोनीमा देखिएका छन् । तल उनका फ्यानहरू हुटिङ गरिरहेका छन् । शाहरूखले डिज्ने हटस्टारबाट फोन आयो ? भनेर सहायकलाई सोध्छन् । सहायकले आएको छैन भन्छन् । शाहरूखले तिमीले फोन गरेनौ ? भनेर सोध्छन् । सहायकले ‘गरेको हो, तर रिसिभ भएन, बिजी होलान् क्रिक्रेटमा’ भन्छ । त्यति नै बेला डिज्ने हटस्टारबाट सहायकको मोबाइलमा एसएमएस आउँछ । त्यसपछि शाहरूखले त्यो मोबाइल बाल्कोनीबाट तल झार्दिन्छन् । फिल्ममा नदेखिए पनि विज्ञापनमा शाहरूखलाई देख्दा भने उनका फ्यानहरू खुसी भइरहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन् ।